स्वस्थ खाना कसरी सुरू गर्ने - यी साधारण सल्लाहहरू लेख्नुहोस्! | बेजिया
के तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाईले खानुहुनु भएको खाना ठीक छैन? के तपाई राम्रो महसुस गर्न चाहानुहुन्छ र केहि थप पाउण्ड छोड्नुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंलाई त्यो धक्का जान्नु आवश्यक छ कसरी स्वस्थ खाना सुरू गर्ने। यो तपाईको स्वास्थ्य र तपाईको शरीरको ख्याल राख्नको लागि उत्तम समय हो, तपाईले लागू गर्नु पर्ने सुझावहरूको एक श्रृंखलाको साथ।
यो कुनै जटिल प्रक्रिया होइन, त्यसैले तपाईले त्यो परिवर्तन महसुस गर्नु पर्छ र थोरै लगनशीलताका साथ, यो हासिल गरियो। सिद्धान्तको रूपमा, निश्चित रूपमा तपाईले ठूलो प्रयास गर्नु पर्दैन तर अलि अलि गर्दै जानुहोस्, उत्तम मार्गनिर्देशनहरू प्रस्तुत गर्दै तपाईंको मार्गलाई मार्गनिर्देशन गर्न। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ यो के हो?
1 स्वस्थ खान सुरु गर्न के किन्ने
2 स्वस्थ खानको लागि उत्तम तरिका के हो
3 स्वस्थ आहारको लागि सुझावहरू
स्वस्थ खान सुरु गर्न के किन्ने
यो सत्य हो कि स्वस्थ खानाहरू बीच हामीसँग लामो सूची छ। तर तपाइँलाई एक विचार दिन:
हामीले बढि फल एकीकृत गरेर सुरु गर्नुपर्दछ जहाँ रातो फलहरू प्राथमिकता हुन्, स्याउ, नाशपाती, नींबू र केरा वा किवीहरू बाहेक।
को सब्जिहरु तिनीहरू स्वस्थ खान सुरु गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छन्। Zucchini, सबै रंगको काली मिर्च, zucchini, प्याज, गाजर वा ब्रोकोली र पालक, मुख्य हुन्। तर हामी टमाटर वा मशरूम र auergines नबिर्सौं।
हाम्रो प्लेटमा पनि प्रोटिनहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तपाईं अण्डाहरू, सेतो मासु वा माछा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं आफ्नो आहारबाट कार्बोहाइड्रेट हटाउन सक्नुहुन्न र त्यसकारण, सधै आलु, पास्ता र खैरो चामल साथै हातमा सम्पूर्ण गहुँको रोटी राख्नुहोस्।
फ्याटहरू तर स्वस्थहरूमा पनि, खाना पकाउन जैतुनको तेल औंल्याउन सुझाव दिइन्छ, avocado सँगै बर्तन, एक खाजा वा बदाम माखन को रूपमा पागल।
स्वस्थ खानको लागि उत्तम तरिका के हो
हामी स्वस्थ छौं भनेर भन्न सक्षम हुन, हाम्रो भाँडामा सन्तुलन रोज्नु उत्तम हो। तर हो, हामी सबै पूर्व-पकाएको खाना र फ्राइड खाना साथै मिठाईहरूलाई औद्योगिक पेस्ट्रीहरू, आदि अलग राख्छौं। त्योले भन्यो, त्यहाँ पछ्याउनका लागि चरणहरूको श्रृंखलाहरू हुन्छन्, जुन तपाईं परिचित हुन निश्चित हुनुहुन्छ र केहि थोरै।
तरकारीहरूले हाम्रो प्लेटको आधा भाग लिन पर्छ। तपाईं तिनीहरूलाई ग्रील्ड, स्टीम बनाउन सक्नुहुन्छ र मसलाहरू थपेर थप स्वाद दिन सक्नुहुन्छ।
अण्डा प्रोटीनको एक महान स्रोत हो र यस कारणका लागि, कुनै पनि सन्तुलित खाना वा यसको नुनको मूल्यको खानामा, तिनीहरू मुख्य पात्रहरू हुनेछन्। साथै सेतो मासु वा टुना पनि उस्तै स्थितिमा छन्।
रातो मासुको खपत सीमित गर्नुहोस्। यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्छ तर यसको मतलब यो सेतोको लागि कुखुरा वा टर्कीको लागि अधिक अप्ट आउट गर्नु हो।
पीठो र पिठो वा सामान्य रूपमा फ्राइड नगर्नुहोस्। फेरी हामी यो भन्छौं कि तपाईलाई पूर्ण रूपमा बिदाइ गर्नुपर्दैन। एक दिन हामी आफैंमा लिप्त हुन सक्छौं वा अन्यथा हाम्रो समान तर घरेलु र स्वस्थ संस्करण बनाउँदछौं। त्यहाँ सँधै विकल्पहरू हुन्छन्!
बिहानको खाजामा परिवर्तन दिनुहोस्। धेरै व्यक्तिहरूको लागि, बिहानको खाजा एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो र जहाँ उनीहरू प्राय: सबै प्रकारका खाना खान्छन्। अब देखि प्रयास गर्नुहोस् कि तिनीहरूले केही प्रोटीनको साथ फल, दही वा सम्पूर्ण गहुँ रोटी बोक्छन् र चिल्लो उत्पादनहरूलाई बिदाइ दिन्छन्।
स्वस्थ आहारको लागि सुझावहरू
जब हामी स्वस्थ खाने बारे कुरा गर्छौं के आवश्यक छ खाना बीचमा सन्तुलन छ किनकि आफैंले हामीलाई चाहिने सबै पोषक तत्व र भिटामिनहरू दिन सक्दैन। त्यसोभए, अब तपाईंलाई थाँहा छ कि तपाईंले बढि तरकारी र फलहरू परिचय गर्नु पर्छ। तपाईंले बोसो र नुनको खपत सीमित गर्नुपर्दछ। तपाईलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने मसलाहरू थप्न सक्नुहुन्छ, हो। साथै सबै मीठो पेय पदार्थहरू पनि वेवास्ता गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नै स्वादहरू घरमा ताजा फलफूल बनाउन सक्नुहुन्छ। पानी पिउँदा र इन्फ्युसन लिन पनि तपाईंलाई पूर्ण महसुस र राम्रो हाइड्रेट हुन मद्दत गर्दछ। बिस्तारै खाना खान सम्झनुहोस् र तपाईं सन्तुष्ट हुनुपर्दछ तर सँधै एउटा सानो अन्तर छोड्नुहुन्छ। यो एक संकेत हो जुन हामी पेटलाई दिन्छौं र प्रत्येक पटक यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दछ ताकि यसले खानाको लागि ती लालसालाई घटाउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » स्वास्थ्य सल्लाहहरू » स्वस्थ खाना कसरी सुरू गर्ने
कसरी एक आउटडोर शामियाना सफा गर्ने